Midowga Yurub oo cambaareeyey qorshaha Israel ee ku aadan dhisitaanka deegaano cusub dhulka filistiin – SBC
Midowga Yurub oo cambaareeyey qorshaha Israel ee ku aadan dhisitaanka deegaano cusub dhulka filistiin
Brussels:-Afhayeenka mas’uulka u qaabilsan siyaasadda arrimaha dibadda midowga Yurub Kathryn Ashton ayaa sheegtay in midowga Yurub uu ka walwalsan yahay dhismaha boqolaalka guri ee cusub ee Yuhuudu ka dhisayso daanta galbeed taasi oo waxyeeleenaysa dadaalka nabadda ee gobolka bariga dhexe.
Maaya Kujiyaanij oo ah afhayeenka Kathryn Ashton ayaa sheegtay in talaabada Israel ay qaadanayso ay tahay wax ka hor imanaya dadaalka beesha caalamka ee ku aadan nabad ku soo dabaalidda hardanka ilaalinaya amaanka Israel islamarkaana xaqiijinaya xaqa filistiiyiintu u leeyihiin dhisitaanka dowlad.
Israel ayaa shaaca ka qaaday isniintii la soo dhaafay dhistaanka qorshe ay ku doonayso guryo ay kadhisto labo xeryo ay degan yihiin Yuhuuda oo ku yaala daanta galbeed ee dhulka filistiin.
Dhanka kale filistiiniyiinta ayaa sheegay in qorshahaas uu xoojinayo go’aankooda ay dadaalka ugu jiraan sidii ay u heli lahaayeen aqoonsiga dowladood QM.
Wasaaradda dib u dejinta Yuhuuda ayaa soo bandhigtay qorshe balaaran oo ay ku dhisayso boqolaal guri si ay hoos ugu dhigto qiimaha guryaha oo kor u kac ku yimid sanadihii ugu dambeeyey iyo si loo raali geliyo mucaaradka doonaya guryo ay awoodaan in ay qiimahooda bixin karaan.
Guryaha sharci darada ay Israel ka dhisayso dhulkii ay ka qabsatay filistiin sanaddii 1967 ayaa waxa ay caqabad ku noqdeen dib u ambaqaadida wadahadaladii nabadda ee u dhexeeyey Israel iyo filistiiniyiinta.
Sanaddii la soo dhaafay waxaa burburay wadahadaladii u dhexeeyey labada dhinac kadib markii ay ka baxeen filistiiniyiinta kagadaal markii ay Israel ku gacan seertay joojinta dhismayaasha sharci darada ah ee ay ka wado magaalada Qudus iyo daanta galbeed ee dhulka filistiin.